दान गर्दा पुण्य मिल्ने तथा जानी नजानी गरेका पापको कर्मको फल समेत नष्ट …..हुने विश्वास…! – Gorkhali Dainik
दान गर्दा पुण्य मिल्ने तथा जानी नजानी गरेका पापको कर्मको फल समेत नष्ट …..हुने विश्वास…!
October 4, 2020 596
दान गर्दा पुण्य मिल्ने तथा जानी नजानी गरेका पापको कर्मको फल समेत नष्ट हुने धार्मीक विश्वास गरिँदै आइएको छ। शास्त्रमा दानको विशेष महत्वको व्याख्या गरिएको छ। यस पुष्य कर्मबाट समाजमा समान्ताको भाव झल्किने विश्वास गरिएको छ।
आज हामीले शास्त्रमा उल्लेख गरिएका दानसँग सम्बन्धित केही कुराका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।गरुड पुराणका अनुसार अन्न, पानी, कपडा, आसन यी ४ बस्तुको दान वर्षमा एक दुई पटक गर्न जरुरी छ। यी ४ कुरा दान गर्दा लामो समयसम्म फल मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
जो व्यक्लिे पत्नी, पुत्र एवम् परिवारलाई दुख बनाएर दान गर्छ भने त्यो व्यक्तिले पुण्य प्राप्त नगर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। दान सबैलाई प्रसन्न गरेर गर्न आवश्यक छ।सहयोगको आवश्यकता परेका व्यक्तिको घरमा गएर गरेको दान सबै भन्दा राम्रो मानिने गरिन्छ।
सहयोगको आवश्यक परेका व्यक्तिलाई घरमै बोलाएर दिएको दानले मध्यम फल प्राप्त गर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ।यदी कोही व्यक्तिले गाई दान गर्ने तथा ब्राहमणलाई विभिन्न बस्तु दान गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई दान गर्न रोक्न हुँदैन। दान गर्न रोक्ने व्यक्ति पापको भागेदार बन्ने शास्त्रमा उल्लेख छ।
Prev‘राजाको ठाउँमा अहिले तेस्तै नयाँ मान्छे आएर देश लुटिरहेको छ’… – सांसद झाँक्री
Nextमासिक १० हजार पाउने भएपछि …………यातायात सुबिधाबापत डाध्यक्षले फिर्ता गरे मोटरसाइकल…!